Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.5.6 talo design Final
Marka laga soo tago shantii mabaadi'da guud ee naqshadeynta, waxaan jeclaan lahaa in aan soo bandhigo laba qeyb oo kale oo talo ah. Ugu horeyn, jawaab-celinta degdega ah ee aad la kulmi karto marka aad soo jeedinayso mashruuc wada-shaqayn leh oo ah "Qofna ma ka qayb qaadan karo." Dabcan waxaa laga yaabaa inay run tahay. Dhab ahaan, la'aanta ka qaybqaadashadu waa halista ugu weyn ee mashaariicda iskaashiga ballaadhan. Hase yeeshee, diidmadu waxay inta badan ka dhalataa in ay ka fekeraan xaalad khalad ah. Dad badan ayaa bilaabay naftooda oo ay ka shaqeeyaan: "Waan mashquulayaa; Taas ma samayn lahayd. Anigu ma aqaano qof kasta oo sidaa sameeya. Si kastaba ha ahaatee, cidina sidaas ma samayn lahayd. "Halkii aad adigu bilaabi lahayd oo aad shaqeyneysid, si kastaba ha ahaatee, waa inaad bilowdaa dadka oo dhan ee ku xiran internetka oo ka shaqeeya. Haddii kaliya hal milyan oo ka mid ah dadkani ka qaybqaataan, markaa mashruucaaga waxay noqon kartaa guul. Laakiin, haddii kaliya hal bilyan oo qof ayaa ka qaybqaataan, markaa mashruucaagu wuxuu noqonayaa mid guuldaraystay. Maaddaama aan u baahannahay in aan helno kala soocida inta u dhexeysa hal milyan iyo hal bilyan, waa in aan garwaaqsanaa in ay aad u adag tahay in la ogaado haddii mashaariicda ay keeni karto ka qaybqaadasho ku filan.
Si aan u sameyno waxoogaa xaddidan, aynu ku soo celino Galaxy Zoo. Imbee Kevin Schawinski iyo Chris Linton, laba astronomers oo fadhiya barxadda Oxford oo ka fakaraya Galaxy Zoo. Waligood ma dhicin-waligood ma dhicin - in Aida Berges, hooyada joogtada ah ee 2-sano ee ku nool Puerto Rico, ay soo afjari doonto boqolleyda galaxiyada toddobaadkii (Masters 2009) . Ama tixgelin kiiska David Baker, biochemist ka shaqeeya Seattle horumarinta Foldit. Weli lama fileynin in qof ka yimid McKinney, Teksas uu magaciisa ku qoray Scott "Boots" Zaccanelli, oo maalin kasta shaqeynaya iibsasho warshad hawo leh, wuxuu habeenkii ku qaadanayaa borotiinka galaya borotiinka, isagoo ugu dambeyntii kor uqaaday tirada lixaad ee Foldit, iyo Zaccaenlli wuxuu u soo bandhigi lahaa naqshadeynta naqshadeynta kala duwan ee fibronectin ee Baker iyo kooxdiisu ay aad u balan qaadeen in ay go'aansadeen in ay ku soo dejiyaan shaybaarkooda (Hand 2010) . Dabcan, Aida Berges iyo Scott Zaccanelli waa qulqulo, laakiin taasi waa awooda internetka: iyadoo balaayiin qof ah, waxaa caadi ah in la helo qashinka.
Marka labaad, oo la siiyo dhibaatadan iyadoo la saadaalinayo ka qaybqaadashada, waxaan jeclaan lahaa inaan ku xusuusiyo in abuuritaanka mashruuc wada shaqeyn heer sare ah uu noqon karo halis. Waxaad maalgashan kartaa dadaal badan oo dhisaya nidaam aan cidna doonaynin in ay isticmaalaan. Tusaale ahaan, Edward Castronova - oo ah cilmi-baare sare oo ka tirsan dhinacyada dhaqaalaha dunidu waxay ku xirantahay deeqda $ 250,000 oo ka timid MacArthur Foundation, oo ay taageerto koox ka mid ah horumariyeyaasha - waxay ku dhawaad ​​laba sano oo isku dayayeen in ay dhisto duni bulshadeed waxay sameyn kartaa tijaabooyin dhaqaale. Dhamaadkii, dadaalkii oo dhan wuxuu ahaa fashilaad sababtoo ah qofna ma rabin in uu ka ciyaaro adduunka virtual-ka ah ee Castonova; waxa kaliya ee aan ahayn madadaalo badan (Baker 2008) .
Iyadoo la tixgelinayo hubin la'aanta ku saabsan ka qaybqaadashada, taas oo ay adagtahay in la tirtiro, waxaan soo jeedinayaa in aad isku daydo inaad isticmaasho farsamooyinka bilawga ah ee saafiga ah (Blank 2013) : samey prototypes fudud adoo isticmaalaya software-ka-ilaalinta oo aad aragto haddii aad muujin karto karti-galin kahor inta aad maalgelin badan horumarinta software-ka gaarka ah. Si kale haddii loo dhigo, marka aad bilowdo imtixaan tijaabo ah, mashruucaagu ma aha-oo waa in aan loo eegin sidii loo jilci lahaa Galaxy Zoo ama eBird. Mashaariicdan, sida ay hadda yihiin, ayaa ah natiijooyinka sanado badan oo kooxo waaweyn ah. Haddii mashruucaagu uu ku guuldareysto - taasina waa suurtagal dhab ah-markaa waxaad dooneysaa inaad ku guul dareysato.